နဂရောပမသုတ်ကို လေ့လာသုံးသပ်ခြင်း - #ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော် ဒေါက်တာနန္ဒမာလာဘိဝံသ - Mầm non Quốc Tế
နဂရောပမသုတ်ကို လေ့လာသုံးသပ်ခြင်း – #ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော် ဒေါက်တာနန္ဒမာလာဘိဝံသ
04/08/2021 Path of Buddhism၂၀၂၁ တရားတော်များ, dhamma, Dr. Ashin Nandamalabhivamsa, meditation, Nibbana, Vipassana, ဂါထာ, ဇာတ်၀တ္ထုများ, တရား, တရားတော်များ, တရားပွဲ, တရားရှုမှတ်နည်း, တရားအားထုတ်, တိပိဋက, ထေရဝါဒဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်, ဒေါက်တာနန္ဒမာလာဘိဝံသ, ဓမ္မကထိက, ဓမ္မသဘင်, နဂရောပမသုတ်ကို လေ့လာခြင်း, နိဗ္ဗာန်, ပါချုပ်ဆရာတော်, ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော်, ဗဟုဿုတ, ဗုဒ္ဓ ဓမ္မ သံဃ, ဗုဒ္ဓဘာသာ, ဗုဒ္ဓဝင်ဇာတ်၀တ္ထုများ, ဘုရား, မဇ္ဈိမပဋိပဒါ, မှတ်သားစရာများ, ရတနာမြတ်သုံးပါး, ဝိပဿနာ, သီလ သမာဓိ ပညာ, သုတ, အန္တရာယ်ကင်း ပရိတ်တော်များ
Tag liên quan đến နဂရောပမသုတ်ကို လေ့လာသုံးသပ်ခြင်း – #ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော် ဒေါက်တာနန္ဒမာလာဘိဝံသ
#PathofBuddhism #တရားတော်များ #ဓမ္မကထိကဆရာတော်များ #ပရိတ် #ပဋ္ဌာန်း
🙏🏻🙏🏻🙏🏻Welcome to Path Of Buddhism Dhamma Channel🙏🏻🙏🏻🙏🏻
🙏🏻 မြန်မာပြည် စစ်အာဏာရှင်လက်မှ အမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပြီး ငြိမ်းချမ်းပါစေ…🙏🏻
If you have benefits from it, please share for the well-beings of others because the teachings of Buddha is for all. Please subscribe 🔔our channel to listen to Dhamma preaching from venerable Sayadaws and meditation teachers.
May all dhamma friends attain peace and happiness.
👉ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးကို Path of Buddhism Channel မှ ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။👈
မြတ်စွာဘုရား၏တရားတော်များသည် သတ္တဝါအားလုံးအတွက်ဖြစ်သောကြောင့် ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အတွက်အကျိုးရှိလျှင် ကြိုက်နှစ်သက်သောတရားတော်များကို တစ်ပါးသူအကျိုးအတွက်မျှဝေပေးပါ။ နေ့စဉ်တင်ပေးသောတရားတော်များသိရှိနာယူနိုင်ရန် ဒီချန်နယ်လေးကို subscribe 🔔လုပ်ထားဖို့မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။ ❤️❤️❤️
သဗ္ဗဒါနံ ဓမ္မဒါနံ ဇိနာတိ။
ရတနာမြတ်သုံးပါရဲ့ မေတ္တာအေးရိပ်မှာ ချွေးသိပ်နိုင်ကြပါစေ။🙏🏻
(Subscribe Link) https://www.youtube.com/channel/UCGfofyzBW6uzqKSFaNf8Juw
ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော် – https://www.youtube.com/playlist?list=PLUeSUjmeXrqaQHHgMR_zu6bklNQJePHsZ
မဟာဗောဓိမြိုင်ဆရာတော် – https://www.youtube.com/playlist?list=PLUeSUjmeXrqZKyaB5N7zLmzO6AVNdWYCk
လန်ဒန်ဆရာတော် – https://www.youtube.com/playlist?list=PLUeSUjmeXrqaZkW3uuqhi7CiIIaaSvz9o
FB link- https://www.facebook.com/sasanaramsivihara/videos/?ref=page_internal
မင်းကွန်းဆရာတော်ဘုရားကြီး – https://www.youtube.com/playlist?list=PLUeSUjmeXrqYIFA-z1QDjvGFS6Y6IAyPp
မဟာစည်ဆရာတော် – https://www.youtube.com/playlist?list=PLUeSUjmeXrqaU7lXeFYohFb96hGhol9CJ
မြောက်ဦးဆရာတော် – https://www.youtube.com/playlist?list=PLUeSUjmeXrqa9dIxxg7UO24r3gymonOaj
သစ္စာရွှေစည်ဆရာတော် – https://www.youtube.com/playlist?list=PLUeSUjmeXrqag6Q8GwTAtWEBOA2L7GdkA
ဓမ္မဓရဆရာတော် ဦးကုမာရ – https://www.youtube.com/playlist?list=PLUeSUjmeXrqa4dT7MUVs2WM19-iA4W0qL
တောင်မြို့မဟာဂန္ဓာရုံဆရာတော် – https://www.youtube.com/playlist?list=PLUeSUjmeXrqb7rW-vFtWyJVoXAx_py7QD
မြစကြာဆရာတော် ဦးလက္ခဏ – https://www.youtube.com/playlist?list=PLUeSUjmeXrqbdvFh3GNFA5mD-XCnbtwr0
ချမ်းမြေ့ရိပ်မြိုင်ဆရာတော် – https://www.youtube.com/playlist?list=PLUeSUjmeXrqbq9cYikrePiB8Uvybpvv2L
နွားဦးတိုက်ဆရာတော် – https://www.youtube.com/playlist?list=PLUeSUjmeXrqaH-BoCCftvVHXTHMcF5unN
အရှင်ဆန္ဒာဓိက – https://www.youtube.com/playlist?list=PLUeSUjmeXrqYymDkHNNr89VxAbb9_sCcK
စာဘူးတောင်းဆရာတော် ဦးကုသလ – https://www.youtube.com/playlist?list=PLUeSUjmeXrqYVb3sddlx4j6Y1Otvn_VRw
သီတဂူဆရာတော် – https://www.youtube.com/playlist?list=PLUeSUjmeXrqarV3b17RK8iH81Dgx2NuzA
English Dhamma Talk – https://www.youtube.com/playlist?list=PLUeSUjmeXrqaZkW3uuqhi7CiIIaaSvz9o
အန္တရာယ်ကင်းပရိတ်၊ ပဋ္ဌာန်း – https://www.youtube.com/playlist?list=PLUeSUjmeXrqZTJkOEqV8LQrKj9bzy7H-2
Dhammpada Verses in English – https://www.youtube.com/playlist?list=PLUeSUjmeXrqYjdzpQ6ipphe6vPZ55Ci4r
မေတ္တာပို့၊ ဘုရားရှိခိုး – https://www.youtube.com/playlist?list=PLUeSUjmeXrqbCXm-RR-TgKdjxxZH5Js2j
trường mầm non quốc tế,တရား,ဘုရား,သီလ သမာဓိ ပညာ,ဗုဒ္ဓဘာသာ,ဇာတ်၀တ္ထုများ,နိဗ္ဗာန်,မဇ္ဈိမပဋိပဒါ,တိပိဋက,Vipassana,ဝိပဿနာ,တရားအားထုတ်,Dhamma,ဓမ္မကထိက,တရားပွဲ,ဓမ္မသဘင်,ရတနာမြတ်သုံးပါး,တရားတော်များ,အန္တရာယ်ကင်း ပရိတ်တော်များ,ဂါထာ,ဗဟုဿုတ,သုတ,မှတ်သားစရာများ,တရားရှုမှတ်နည်း,meditation,ဗုဒ္ဓဝင်ဇာတ်၀တ္ထုများ,ဗုဒ္ဓ ဓမ္မ သံဃ,Nibbana,ထေရဝါဒဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်,ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော်,ဒေါက်တာနန္ဒမာလာဘိဝံသ,၂၀၂၁ တရားတော်များ,ပါချုပ်ဆရာတော်,Dr. Ashin Nandamalabhivamsa,နဂရောပမသုတ်ကို လေ့လာခြင်း
Bé vẽ tranh theo nhóm - Mầm non Newsun
Previous Previous post: Cuộc Thi Vẽ Tranh Trên Nón Lá Siêu Đẹp – Nón Nào Đẹp Nhất ? Hà Sam
Next Next post: DẠY HỌC DỰ ÁN LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM I TRẦN HẰNG